AFAR rikoodh oo sugeysa inuu jabiyo Lionel Messi kaddib markii uu go’aansaday inuu la joogo Barcelona – Gool FM - Idman news
AFAR rikoodh oo sugeysa inuu jabiyo Lionel Messi kaddib markii uu go’aansaday inuu la joogo Barcelona – Gool FM
(Barcelona) 05 Seb 2020. Xiddiga reer Argentine ee Lionel Messi ayaa si Rasmi ah u shaaciyay in uu sii joogi doono kooxdiisa reer Spain ee Barcelona xilli ciyaareedka cusub.
Madaxweynaha k Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa u diiday Lionel Messi inuu ka tago ooxda ilaa iyo laga bixinayo qiimaha lagu burburin karo qandaraaskiisa ee gaaraya 700 million euros.
Messi oo sii joogaya xilli ciyaareed kale safka Blaugrana ayaa u oggolaan doonta inuu jebiyo 4 rikoor cusub oo xirfadiisa ciyaareed ah, sida ay xustay shabakadda Isboortiga “TYC” ee dalka Argentina.
33 jirkan reer Argantina ayaa u ciyaaray ilaa iyo hadda Barcelona 731, taasoo ka dhigtay inuu booska labaad kaga jiro xiddigaha ugu safashada badan kooxda Barca ee taariikhda kaddib saaxiibkiis hore ee Xavi Hernandez oo ah kan ugu safashada badan, Messi ayaa heli doona fursad uu ku dhaafi karo rikoodhka u yaala Xavi oo kaliya ay u dhexeyso 36 kulan.
Sidoo kale kabtanka kooxda Barcelona oo 634 gool ku dhaliyay maaliyada kooxda Barcelona ayaa ku dhow inuu jabiyo rikoodhka halyeeyga reer Brazil ee Pele, kaasoo heysta rikoodhka ah goolasha ugu badan uu laacib u dhaliyo hal koox taariikhda, wuxuuna u dhaliyay 643 gool kooxda Santos, inta u dhaxeysay 1950-meeyadii ilaa iyo 1970-kii, wuxuuna xiddiga reer Argantina u baahan yahay kaliya inuu dhaliyo 10 gool Xilli ciyaareedka cusub.
Rikoodka saddexaad ee sugaya inuu dhaafo Lionel Messi xilli ciyaareedka cusub ayaa ah tirada sanadaha uu u ciyaaray kooxda Barcelona oo noqonaya 17 sano, wuxuuna la mid noqon doonaa Carles Rexach iyo Xavi Hernandez, kaddib markii uu soo barbareeyay dhammaadkii xilli ciyaareedkii hore tirada Andreas Iniesta oo muddo 16 sano ah ku ciyaaray maaliyada Blaugrana, laga soo bilaabo 2004 ilaa iyo 2020.
Messi ayaa sidoo kale awoodi doona inuu kordhiyo tirada koobabkii uu la qaaday kooxda Barcelona ee ah 34 koob, sidaas darteed haddii uu ku guuleysto koobka Spanish Super Cup iyo saddexleyda kala ah horyaalka La Liga, Copa del Rey iyo Champions League, wuxuu jabin doonaa rikoodhka Maxwell oo heysta 37 koob, maadaama uu xiddiga reer Argantina ku fariisan doono booska labaad liiska xiddigaha ku guuleystay koobabka ugu badan adduunka 38 koob, wuxuuna labo koob oo kaliya u jirsan doonaa laacibka liiskan hoggaaminaya ee Dani Alves oo ku soo guuleystay 40 koob.
Previous Olivier Giroud oo ka aragti dhiibtay imaatinta Timo Werner ee kooxda Chelsea – Gool FM
Next Olivier Giroud oo ka warbixiyay sida uu yahay xiriirka kala dhexeeya tababare Frank Lampard – Gool FM